Labada Cayaarayahan Ee Codsatay Lambarka 10aad Ee Uu Ka Tagay Mesut Ozil – Garsoore Sports
Labada Cayaarayahan Ee…
Kaddib markii uu kooxda Arsenal ka tagay kubbad-sameeye Mesut Ozil, Waxaa imanayay dalabyo la cariira helitaanka funaanada nambarka 10aad ee uu xiddigan caanka ku ahaa intii uu waxdaraha ka dhigayay Waqooyiga London iyadoo laba xiddig ay horeba u codsadeen in ay dhaxlaan Lambarka xiddigan Jarmalka u dhashay uu ka tagay.
Cayaaryahan Mesut Ozil ayaa ka tagay kooxda Gunners bishii Janaayo markii uu u dhaqaaqay kooxda Turkiga ka dhisan ee Fenerbahce kaddib markii uu saaxiibkiisii hore Mikel Arteta u sheegay inaanu qeyb ka ahayn mustaqbalkiisa kooxda.
Xiddigii hore ee Real Madrid ayaa lagu qasbay inuu qaato maaliyadda N.11 markii uu usoo dhaqaaqay Waqooyiga London xagaagii 2013, waxaana qasab ku noqotay inuu waqtigiisa qaato kahor inta uusan qaadan lambarka uu jecel yahay ee 10aad markii uu kooxda isaga tagay Jack Wilshere oo nambarkaas xirnaa.
Kaddib bixitaanka Ozil, Weli go’aan lagama gaarin cidda xiran doonta lambarka funaanadda ay kusoo xarakeeyeen halyeeyada kooxda Arsenal Dennis Bergkamp iyo William Gallas.
Nambarka 10aad ee Arsenal waxaa dhaqan ahaan loo qoondeeyay kubbadsameeye weyn ah laakiin sida laga soo xigtay ESPN, Alexandre Lacazette, oo nambarka 10 kusoo xirtay waqtigiisii Lyon, ayaa codsaday in la siiyo, halka kabtanka kooxda ee Pierre-Emerick Aubameyang uu sidoo kale xiiseynayo.
Lacazette ayaa hal sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan inkasta oo uusan muujin wax calaamado ah oo ku aadan inuu ka dhaqaaqayo kooxda, Arsenalna uma badna inay qandaraas kale oo qaali ah usoo bandhigto ciyaaryahan qarka u saaran inuu 30 sanno jirsado.
Emile Smith Rowe ayaa isna ah musharax kale. Xiddiga reer England ee 21 jirrada oo sameeyay horumar la taaban karo xilli ciyaareedkan, ayaa umuuqda inuu mustaqbalkiisa u hibbeyn doono kooxdiisii ​​carruurnimo isagoo kala hadlaya heshiis cusub. Xiddiga ay isku xulka yihiin ee Bukayo Saka ayaa sidoo kale ah dookh kale, laakiin xiddigan wuxuu kaliya qaatay maaliyadda Nambarka 7aad oo ay horay usoo xirteen halyeeyada kooxda Robert Pires iyo David Rocastle.
Go’aan ayaa laga qaadan doonaa ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkaan iyadoo la tixgelinayo wadaxaajoodyada kooxda ay kula jirto Martin Odegaard oo ay macquul tahay isna inuu musharax noqdo haddii uu sii joogo kooxda.
Cayaaryahankan heerka caalami ee dalka Norway ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigay tan iyo markii uu amaah uga soo dhaqaaqay Real Madrid bishii Janaayo, waxaana Arteta uu doonayaa inuu si joogta ah ula soo saxiixdo ciyaaryahanka oo haatan xiran maaliyada Nambarka 11aad.